Zọ dị irè iji bipụta ngwa gam akporo na Playlọ Ahịa Google Play Martech Zone
Simplezọ kachasị mfe iji kesaa ngwa gam akporo bụ site na ụlọ ahịa Google Play. Ọ bụ ụzọ kachasị dị mgbagwoju anya iji rute ọtụtụ ndị ahịa nwere ike. Nyefe ngwa mbụ na Storelọ Ahịa Play abụghị nsogbu na ihe ahụ, naanị gbasoo ndụmọdụ abụọ na ngwa gị kwadebere maka nbudata.
Ndị na - emepe ngwa ngwa gam akporo na - agba mbọ inye gị ngwa kacha mma enwere ike ịnata site na ndị na - ege ya ntị. I jiri oge buru ibu na-eme ngwa ahụ, mezuo ihe niile ị nwere ike ime wee nye 100% na ngwa gị. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ ohere dị mma iziga ngwa gị na ụwa. Ihe karịrị 1 ijeri gam akporo ndị ahịa na-agbanwe agbanwe dị n’ebe niile n’ụwa. Otu ogbo a ga-eme ka ị bịaruo nso ịkpọtụrụ otu ịchọrọ mmasị.
Ihe dị ka nde 2.47 nwere ike ịnweta na Storelọ Ahịa Play na gburugburu 3739 ngwa na-amalite kwa ụbọchị.
Statistics, Ọnụ ọgụgụ nke Ngwa na Applọ Ahịa 2019
Onweghi onye ga-agọnahụ uru na Google Play Store bara na mpaghara nke ngwa mkpanaka. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ị mara - otu esi ewepụta ngwa na Google play store, n'oge ahụ ịchụso gị kwụsịrị ebe a. E nwere echiche na ị kwesịrị ị na-achụso na n'ụzọ dị irè nyefee ngwa na google play ụlọ ahịa. N'akụkụ ndị a, olee otu anyị si amalite.
Nyochaa ngwa gị - Firstly, ị ga-anwale gị ngwa otu nọmba nke ụzọ dị ka i nwere ike ịbụ na-100 percent n'aka na ọ ga-eme Ezi, tupu nyefee ngwa na play ụlọ ahịa. Can nwere ike n'ozuzu ahu nagide emulators n'ihi nke a. Iji ngwa gam akporo na-achịkwa ga-anapụta usoro nnwale ahụ na-esikwu ike. Ọ ga-enye gị ahụmịhe nke tinye n'ọrụ gị na ezigbo gadget ma nye gị ike ịkwatu ọ bụla chinchi.
Ngosipụta nke ngwa - N'ebe mgbe ị na-eme ngwa ahụ, gbalịa belata nha nke ngwa ahụ. Ogo nke ngwa ọ bụla dị mkpa. Ndị ahịa anaghị eche na ọ dị ha mkpa ibudata ngwa nke nwere nnukwu oghere na ngwaahịa na-akwakọba ihe ha. N'ezie, ọbụlagodi Google na-enye ikikere itinye ngwa ahụ ruo 50MB. Ọ bụrụ na ngwa gị dị oke, ị ga-achọ ka akụkọ mmepe APK wee kee ya n'ime ngalaba ka enwere ike ịfefe ya. Ikwesiri ka akara gi na Google Play Console ma buru onye mgbasa ahia. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ngwa gị gafere ebe nga a, n'oge ahụ ịkwesịrị iji ihe ndekọ Mgbasawanye gam akporo APK, iji zipụ ngwa gị nke ọma. Nke a ga - ewepu ngwa gị na ngalaba yana Mee nke ọ bụla ruo 2GB, na - enye ohere 4GB ohere na ngwa gị. A na-etinye ozi ndị ọzọ na Google Cloud ma weghachite na ebe ọ bụla etinyegoro ngwa ahụ.
Nweta Akwụkwọ ikike - Ọ ga-afụ ụfụ gị ka gị na ngwa ikike ruo mgbe ị nyefee gị ngwa Google Play Store.
Lekwasị anya na ndekọ APK na NJ ID na Nọmba Versiondị - Ikwesiri ịtọlite ​​akụkọ APK nke ị nwere ike igbunye ọnụọgụ ọnụọgụ maka ngwa gị nke ga - enyere gị aka ma emechaa ịkwesịrị ịnyefe akụkọ ọzọ na ngwa gị. Pack ID dika a na-akpọ App ID ma tinye ya n'ọrụ iji mejupụta ya, ọ bụ akụkụ dị ịrịba ama mgbe ị na-eweta ngwa gị. Nke a nwere ike itinye aka na ngwa niile maka gam akporo 5.0 ma ọ bụ karịa.
Kwesịrị Banye Ngwa na Akwụkwọ Asambodo niile - Nke a bụ ọgbụgba ndụ nke ọma akara dị ka APK nke ị ga-achọ oge ọ bụla ị kesara ngwa na Storelọ Ahịa Play. A na - akpọ nke a JSK akwụkwọ nwere asambodo, dịka ọmụmaatụ, ahịrịokwu nzuzo Keystore.
Mee Ndepụta Storelọ Ahịa Ngwa gị - Ntinye ntinye akwụkwọ bụ ihe dị ike na-enyere ngwa gị aka ibudata nbudata. Ọ bụghị mmadụ ọ bụla na-enye oge ha na ntinye akwụkwọ kama kama ịhapụ ohere ị ga-eme nke a tupu ị nweta ngwa ngwa gam akporo, ị ga-achọpụta ụfọdụ ihe ịtụnanya. Needkwesịrị ịnye ụfọdụ ndị ahịa ụfọdụ ụdị ụdị ya bụ na ihe bụ njirimara ya.
Nzọụkwụ iji bipụta ngwa gam akporo na Google Play
Tupu izipu ngwa gam akporo na Google Play, gbaa mbọ hụ na edobere ihe niile. Ga-achọ ụfọdụ ngebichi nke ngwa gị (na nnukwu caliber), usoro nke ngwa ahụ yana, doro anya, akwụkwọ APK (ngwa ahụ n'onwe ya). Enwere mgbochi siri ike gbasara etu otu ngwa si dị. Ọnọdụ kachasị oke bụ 100 Mbytes. A ga-ahọrọ ya ma ọ bụrụ na ọ karịrị 50 Mbytes, n'oge ahụ ndị ahịa bi na mpaghara nwere netwọkụ dị egwu ga-enweta ohere iji ngwa gị. Ndị a bụ ụzọ ịkesa ngwa gam akporo na Google Play:
Mepụta akaụntụ mmebe - Mepee Google Play Console ma mee akaụntụ engineer. Ego ole ka ọ na-eri iji kesaa ngwa gam akporo? Ihe omume a na-efu $ 25. Na-akwụ ụgwọ naanị otu ugboro, ndekọ ahụ na-enye gị ihe ùgwù ikesa otu ọnụ ọgụgụ nke ngwa ị chọrọ mgbe ọ bụla na ebe ọ bụla.
Pịnye aha na ngosipụta nke ngwa gị - Ọ ka mara ihe ịtụle ya tupu ikesa ya. Mgbe ị na-eme nyocha na-achọ okwu elekere iji tinye ha na ngosipụta ngwa gị. Ihe mbụ onye ọrụ ahụ hụrụ bụ aha nke ngwa ahụ, ihe na-adọrọ adọrọ na-enyere aka inweta uche nke onye ọrụ ọ bụla! Gbado anya kwesịrị ịdị na ọchị na aha nkọwa.
Gụnye njigide ihuenyo - Ọ dị mkpa iji hụ na nseta ihuenyo bụ nke dị elu. Gbaa mbọ hụ na foto ndị ahụ gosipụtara ụfọdụ isi pụrụ iche dị na ngwa gị, ma ọ bụ echiche bụ isi nke ngwa ahụ.
Kpebie ogo ọdịnaya nke ngwa gị - Ugbu a, ị ga-aza ajụjụ ole na ole iji kpebie ihe ị na-eme. A na-atụ anya ịmachi ụmụaka ibudata ngwa gị na ohere ọ nwere na ọ nwere ọdịnaya toro eto ọ bụla. Better ga-aza n'ezie ihe ọzọ ị ga-agọnahụ ịhapụ ihe ngwa gam akporo na Google Play.
Họrọ nhazi ọkwa - Ọ bụ N'otu aka ahụ dị ịrịba ama na ihe mgbakwasị na ọ na-ewelite nsogbu gị na nbudata. Na ohere ịhapụ ị na-ahọrọ ọkwa na-ekwesịghị ekwesị, ndị mmadụ agaghị enwe nhọrọ iji hụ ya na klaasị ọ kwesịrị!
Jikwaa nsogbu usoro nchebe - Ọ bụrụ na ngwa ahụ jiri usoro ozi ọ bụla nke ndị ahịa ọ bụla ịchọrọ igosipụta ya ma gụnye usoro nchedo nke ị ga - eme iji hụ na ị gaghị etinye ozi a maka uru gị N'ime usoro nchebe ị kwesịrị igosipụta ndị ahịa ihe ozi a ga-achịkọta, otu esi edozi data a na onye ga-abịaru ya nso.
Eziokwu ahụ bụ na pasent 42 nke ndị bi n'ụwa na-eji usoro mgbasa ozi eme ihe zuru oke maka ya ka ọ bụrụ ikpo okwu kachasị mma.
Ọ bụrụ n ’ị chere na mgbe ị zigara ngwa na Storelọ Ahịa Play n’ụzọ dị irè ị nwere ike izu ike na osisi gị. E nwere ọtụtụ ọrụ ị ga-arụ na-aga n'ihu! Ndụ nke ngwa gị mgbe ebipụtara dabere na gị (ma ọ bụ otu ndị na-arụ ọrụ maka gị). Imirikiti oge, nkwado mgbe ịmalitere na-achọpụta iru nke ngwa ahụ yana uru ọ barala ndị ọrụ.
Ihe kacha mma mbanye anataghị ikike ebe a bụ na-akụ na-ahịa gị. Ndị na-agbanwe agbanwe bụ ndị nduzi kachasị mma. Ha nwere ike ịkekọrịta nzaghachi nghọta sitere n'aka ndị ọrụ nwere ike imezigharị. Ọ bụrụ na ị jiri nkatọ nke ndị ahịa dị ka isi mmalite nke data bara uru, ị ga-enweta ohere niile iji bulie ego ma mee ka ọ bụrụ isi
Na-achọ ịzụlite ngwa mkpanaka gị? Jikọọ na anyị, Sysbunny bụ ụlọ ọrụ mmepe ngwa ngwa achọpụtara nke mepụtara ọmarịcha mma, yana mmepe ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa.
Tags: google play storemobile ngwaebipụta ngwaebipụta ngwa mkpanaakasysbunny